April 2014 – Ministry of Education in Puntland
April 21, 2014 / News
Muwaadin reer Puntland ah oo Taageero soo gaarsiiyey Wasaaradda Waxbarashadda.
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa weli ku howlan qalabaynta xafiisyada maamulada Waxbarashada ee Degmooyinka Puntland, Wasaaradda ayaa dhowaan qalab ay keentay DIAKONIA waxay ku wareejiyeen gudoomiyayasha Waxbarashadda iyo kuwa degmooyinka. Degmooyinka […]
April 19, 2014 / News
Wasaradda waxbarashada oo qalab gudoonsiiyay gudoomiyasha waxbarashada degmooyinka.
Garowe. Waxaa masuuliyiinta Wasaradda waxbarashada dowladda Puntland ay labaatan degmo oo ka tirsan Puntland ku wareejiyeen qalabyo xafiisyadda waxbarashada degmooyinka loogu talo galay,kuwaasoo Wasaraddu ugu deeqday hay’adda Diakonia. Munaasibad qalabkan degmooyinka […]
April 17, 2014 / News
Waxaada Waxbarashada dadban oo tababar u qabatay gudoomiyeyasha goboladda Waxbarashadda.
Garo0we: Waaxda Wasaaradda Waxbarashadda u qaabilsan hormarinta Waxbarashadda Dadban ayaa tababar u qabatay kormeerayaasha gobolada iyo gudoomiyayaasha waxbarashadda ee heer gobol. Tababrkaan ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii kor loogu […]
Shirkii bilaha oo u dhaxyey Wasaaradda Waxbarashada iyo ha’yadaha oo Qarsoomay.
Waxaa kulan iskugu yimid xaruta wasaradda waxbarashadda Puntland ee Garowe masuuliyiinta Wasaaradda iyo saraakiil ka socdey hay’adaha Waxbarashadda ku hawlan. shirkaa ayaa waxaa furay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada puntland […]
Kulan dhexmaray Wasaaradda Waxbarashadda iyo ha’yadda Cuntadda aduunka(WFP).
Wasaradda Waxbarashada oo ka qayb qaadanaysa dhismaha Buundada Sunijiif.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashadda Puntland Oo Dib Ugu Soo Laabtay Dalka.